N'ime nke a, ndị ụka sitere na njikọta ụka katọliki dị iche iche na Dayọsiisi Awka, ka a hụrụ n'okporo ụzọ dị iche iche ka ha bù obe, buru nne dị asọ bụ Virgin Mary ma burukwa ọtụtụ akwụkwọ e degasịrị ihe, nke gụnyere: "Kwụsị Igbusi Ndị Ụka"; "Hapụnụ Ụmụ Mmadụ Ka Ha Kpeere Chi Ha" ; "Igbu Mmadụ Bụ Arụ"; "Nke a Bụrụkwa Ebembere"; "Buharị Rụọ Ọrụ Gị Dịka Mmadụ"; "Buharị Kpọọ Ihe Ọjọọ Ihe Ọjọọ"; "Onye Ọbụla Gaa Weta PVC Ya" na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, wee kwụọ n'ahịrị, na-aga n'ụlọ ụka St. Patrick Cathederal, bụ ebe ha niile nọrọ wee zukọọ.
N'ozi ọ gụpụtara n'ọgbakọ ahụ iji kọwaara ụwa otu obi dị ha na ebumnobi ha jiri chịkọba ngagharị udo ahụ, Chancellor uka Katọliki na Dayọsisi Awka ma bụrụkwa onye nọchitere anya Bishọọpụ Paulinus Ezeokafọr nke Dayosis ahụ, bụ Rev. Fr. Dr. Francis Chidume kwuru na isi sekpụ ntị na ngaghrị ahụ bụ ka ha gosi ụwa na obi adịghị ndị ụka mma otu e si egbusi ndị otu ha n'ebe dị iche iche n'ala anyị, ọ kachasị ụkọchukwu Joseph Gor na Felix Tyolaha, tinyere ndị ụka mmadụ iri na asaa ndị ọzọ bụ ndị e gburu egbu n'ime ụlọ ụka site n'aka ndị Fụlani na-achị ehi na steeti Benue, bụkwa ndị e mere mmemme akwamozu ha ụbọchị Tuzdee ahụ.
O kwuru na amụmà nchekwa n'okpuru ọchịchị Muhammadụ Buharị bụ nke kpụrụ afọ n'ala, katọọ otu onyeisi ala anyị siri raa ntị mmanụ ma kụkọọ aka na-ele otu ndị Fụlani si egbusi ụmụ mmadụ, ma kwuo hoohaa na nke ahụ bụ iji gosi ụwa n'ezie na nchekwa adịghị n'ala Naịjiria, tinyekwuoro na isi ọchịchị ala anyị mà ebe ihe na-eme anyị si abịa, ma ha achọghị ime ihe ọbụla, n'ihi oke akpọmasị ahụ e nwere megide okpukperechi ndị otu Kraịst. Ọ katọkwara otu e siri napụsịa ụmụ mmadụ obere ngwọ ọgụ ha ji echekwaba onwe bụ nke ha nwetara n'ụzọ iwu kwàdoro, ebe ndị Fụlani na-achị ehi bụzịkwa ndị a hapụrụ ka ha were egbe nke ha na mmà ha sụba ụmụ mmadụ akwụ.
Na mbụ n'okwuchukwu ya na nkenke àjà maasị a chịkọbara n'ọgbakọ ahụ, onye nhazi na onye nlekọta nke ụlọ ụka St. Patrick Cathederal ahụ, bụ Rev. Fr. Matthew Attansi kwuru na oge eruola oge ndị otu Kraịst ga-eguzo megide ndị na-emegide ha, ọ kachasị site na ngwọ agha ha bụ ekpere, ka Chineke onwe ya wee bilie n'oche eze ya ma were ihe otiti megide ndị na-emegide ụmụ Ya, ma bibie ha na atụmatụ ọjọọ ha niile, dịka o siri mee n'ọtụtụ ebe dị iche iche n'oge gara aga na n'ime akwụkwọ nsọ.
Ọ katọrọ ịda mba nke ọchịchị gọọmenti etiti na ngalaba niile, ọ kachasị na ngalaba nchekwa ndụ na akụnụba ụmụafọ Nigeria, bụ nke kwesiri ịbụ ihe mbụ gọọmenti na-emere ndị ọ na-achị, ma kpọkuzịe onye ọbụla ka rugoro ahọ iri na asatọ, ka ọ gbaa mbọ ga weta akwụkwọ ikike ya bụ PVC ma dokwaba ya nke ọma maka ahọ na-abịa abịa.
N'ajụjụ ọnụ a gbara ya, onye ụkọchukwu nọ na ụlọ ụka 'St. Joseph The Worker Chaplaincy" nke mahadum Nnamdị Azikiwe, bụ Rev. Fr. Nnaemeka Okeke kọwara ngagharị udo ahụ dịka naanị ụzọ pụtara ihè na otu ụzọ a tụrụ anya ndị otu Kraịst nwere isi gosipụta mwute ha banyere ajọ ọnọdụ ahụ a kpụ n'ọnụ, n'ihi na ha agaghịnị akpaba aghara ma ọ bụ buru egbe jebe ọgụ dịka ụfọdụ otu dị iche iche si eme ma ọ bụrụ na e mejọọ ma ọ bụ gbuo onye òtù ha.